ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် လူထုဆန္ဒကို အစိုးရ အလေး မထားဟု ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြောကြား
Myo Khin နေရပ်- Myanmar :
(Yangon နေရပ်- Yangon :
Thant Sin နေရပ်- Myanmar :
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဘို့ အချိန်လဲရောက် ရော ဦးသိန်းစိန် ရှောင်ဖယ်ဖယ် လုပ်နေ တယ်။ xxx လွန်ဆန်ရမဲ့ အလုပ် မလုပ်ရဲဘူး။ သတ္တိ ရှိရင် ဒေါ်စု နဲ့ နှစ်ယောက်ဆွေးနွေးတုန်း က ဘာတွေ ဆွေနွေးကြတယ် ဆိုတာ ပြည်သူကိုချပြရဲလား။ ဒေါ်စုကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေး ခဲ့တယ် ပြောတယ်။ သူတို့ ကတော့ ဝသီ အတိုင်း လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရအောင် သူတို့ကို ပြည်သူ အဆိုးမမြင်အောင် ဖုံးကွယ်ထားတယ်။
Apr 05, 2015 06:01 AM
Maung Aye နေရပ်- Yangon. :
From the beginning Thein Sein is working for Than Swe in order to protect him. Myanmar policy can be possible to change after Than Swe follow to his ancesters.
Apr 04, 2015 10:21 PM
အမည်မဖော်လိုသူ နေရပ်- Yangon. :
Boycotting for election can be right decision but present government will rather happy for another term. One of the best ways can be that Suu kyi remain as party leader while other members run as government for the sake of country.Because everybody know that present government is not qualify to lead the country. Or Suu Kyi can be Chairman in parliament. Everybody know that Suu Kyi is much more qualify to be president for Myanmar. No doubt,even she can lead the world.
Apr 04, 2015 10:18 PM
Do not blame the others, you must take all the blames yourself bloody woman.
You willingly went into their trap to get caught.
Now, it's too late to talk about regrets.
You definitely do not have reliable leadership skills, bloody stubborn woman.
အမည်မဖော်လိုသူ နေရပ်- Yangon :
Actually Suu Kyi being deceived by Thein Sein from the beginning by saying that to work together in same perspective for the country by ignorance to some conflicts.Thein Sein has plan to use Suu Kyi to stop sanctions and success inacertain condition.He has taken several opportunity for his party.To my personal understanding Suu Kyi also too much positive to Thein Sein government like US government.Thein Sein is dishonest but seems smarter in seeking benefits for his party. Than Swe will be happy for his success.
Apr 04, 2015 09:00 PM
Myo Chit Myanmar နေရပ်- Myanmar :
ဒေါ်စုကို အခြေခံ ပြင်ချင်ရင် လွှတ်တော် ထဲ ဝင်ပြင် ပါ လို့ အကောက်ကြံ စည်းရုံးခဲ့တယ်။ တကယ်တန်းကျတော့ လွှတ်တော်ထဲ မှာ မပြင်နိုင် အောင် စစ်ထွက် ကြံ့ဖွတ်တွေ ကို အမတ် အများအပြားနေရာရအောင် ပြောင်မဲလိမ်ပြီး ထည့်ထားတဲ့ အပြင် စစ်သားတစ်မတ်သား လဲ အတင်း ထည့်ထားသေးတယ်။ ဒေါ်စု ကို အမြင်မတူတာတွေ ခဏဘေးဖယ်ထားပြီး အမြင်တူတာတွေ ကို ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြ မယ်လို့ မြေခွေးလို ကောက်ကြစ် စဉ်းလဲ တဲ့ အကြံနဲ့ စည်းရုံးပြီး နိုင်ငံတကာအ မြင်မျက်နှာ ကောင်း ရအောင် အသုံးချတယ်။ အမြင်မတူတာတွေ ခဏဘေးဖယ်ထားပြီး အမြင်တူတာတွေ ကို ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြ မယ် ဆိုတာ တကယ်တော့ ညာခိုင်းတာပါ။ မလုပ်ပြန်ရင်လဲ ဒေါ်စု ဟာ တိုင်းပြည်အကျိုးကို မကြည့်ဘဲ ကိုယ်အာဏာရရှိရေး ဘဲလုပ်တယ် လို့ ပြောလို့ရအောင် လုပ်တာ။ လုပ်ပြန်တော့လဲ သူတို့ဖြစ်စေချင် တာလေး (သူတို့လက်ထက်မှာ ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ် နိုင်ငံတကာ အမြင် သူတို့အပေါ် အကောင်းမြင်တယ်)ဆိုတာတွေ လဲရရော ဒေါ်စု ကျိုးစားနေတဲ့ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေဒီ ရရှိရေး တွေကို လစ်လျူရှုလာတယ်။
Apr 04, 2015 08:20 PM
စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ပြည်သူ့အကျိုးးကို ဘယ်တုန်းကမှ မကြည့်ခဲ့တာ။ “ပြည်သူ့ဆန္ဒ”လောက်တော့ .. (ရီတာပေါ့ ရီတာပေါ့)
Taing Yin Thar နေရပ်- Myanmar :
တကယ်တော့ ပြည်သူတွေ ချီတက် နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းခရီး ဟာ လမ်းစပေါ်ရောက်နေပါပြီ။ ပန်းတိုင်အရောက် ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြူးဖြူး ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဘို့ အတွက် တပ်မတော် ဟာ အာဏာရှင် တွေဘက်ကရပ်တည်တာ စွန့်လွှတ်ပြီး ပြည်သူ နဲ့ လက်တွဲညီညီ ချီတက် ဘို့ အချိန် ရောက်ပါပြီ။ အရေးအခင်း ကာလတွေ မှာလက်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ အခွင့်အရေး တွေလို အခုတစ်ခါ ရရှိ နေတဲ့ အခွင့်အရေး ကို လက်လွှတ် အဆုံးရှုံးမခံခြင်းဖြင့် အာဏာရှင်တွေဘက်က ဇွတ်မျက်စေ့မှိတ်ရပ်တည်မဲ့အစား ပြည်သူ ကြည်ညိုတဲ့ သိက္ခာရှိတဲ့ ပြည်သူ့တပ်မတော် အဖြစ် ရပ်တည် ဘို့ကြိုးစားသင့်ပြီ။
Apr 04, 2015 04:09 AM
ဦးသိန်းစိန် ဟာ လူကောင်းတစ်ယောက်တော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်စိတ်ကြိုက်ဆွဲခဲ့တဲ့ အခြေခံ ဥပဒေ ကို ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်း မီအောင် ပြင်ဘို့ သူဘယ်လောက် စွမ်းဆောင်နိုင်မလဲ ကြည့် ရအုံးမယ်။ လောလောဆယ်တော့ သူစွမ်းဆောင်နိုင်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ စစ်တပ် ကိုလဲ ပြည်သူ့ ဆန္ဒ အတိုင်း လိုက်နာအောင် ပြည်သူ့ဘက် ကရပ်တည်အောင် မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ စစ်တပ်ဟာ အာဏာရှင်တွေအတွက်ရပ်တည်နေတုန်းဘဲ။
Apr 04, 2015 04:03 AM
triနဝင္း နေရပ်- thaton :
Apr 04, 2015 03:43 AM